Miyay Hore Liverpool iyo Tottenham Iskugu Arkeen Kulan Final Ah?
Xili ciyaraeedkii 1981/82 kii kooxaha Liverpool iyo Tottenham ayaa iskugu soo baxay finalkii League Cupka waxayna labada kooxood isla tageen waqti dheeri ah iyada oo Liverpool koobka ku qaatay guul 3-1 ahayd.
Finalkii League Cupka ee Wembley Stadium ka dhacay xili ciyaareedkii 1981/82 kii waxay Tottenham hogaanka ciyaarta haysay ilaa daqiiqadii 76 aad laakiin Kulan ay 100,000 kun oo qof soo dhafiisteen Wembley Stadium waxaa Reds ciyaarta dib ugu soo celiyay Ronnie Whelan kaas oo kansalay goolkii Steve Archibald uu Tottenham u dhaliyay daqiiqadii 11 aad ee kulankan.
Goolka uu Ronnie Whelan u saxiixay Liverpool waxa uu sabab u noqday in ciyaarta waqti dheeri ah lagu daray wuxuuna markale Whelan dhaliyay gool halka Ian Rush uu isna shabaqa ka soo taabtay Spurs taas oo keentay in Liverpool ay guul soo laabasho 3-1 ah koobka EFL Cupka ay Tottenham kaga qaaday.
Dariiqay Tottenham U Soo martay Finalka Champions League?
Tottenham waxay soo martay imtixaan aad u adag iyada oo qaybtii hore ee xili ciyaareedkan u muuqatay in ay heerkii groupyada ee Champions league ku hadhaysay laakiin si layaableh ayay u soo kabsatay.
Tottenham ayaa kaalinta labaad kaga so obaxday Group B kadib markii babraro muhiim ahaa Camp Nou kaga soo heshay Barcelona laakiin waxay si layaableh ku soo dhaaftay Borussia Dormtund oo ay isku arkeen wareegii 16ka kooxood ee Champions League.
Tottenham ayaa Borussia Dortmund marti iyo minanba ku garaacday wareegii 16ka waxayna wadarta labada Kulan ka heshay 4-0 iyada oo sidaa ugu soo baxday siddeed dhamaadkii Champions League.
Kadib Tottenham waxay soo martay wacdarihii layaabka lahaa ee ay Man City kaga cidhibtirtay koobka Champions league iyada oo kulankkii lugtii hore ay Spurs guul 1-0 ah ka heshay Man City.
Laakiin kulankii waalida ahaa ee Etihad Stadium waxay Tottenham la kulantay guuldaro laakiin wadarta labada Kulan oo babraro 4-4 ah noqday dhamaadkii ciyaarta ayay Spurs ugu soo baxday sharciga goolasha martida ah taas oo qalbi jab wayn ku noqotay Man City.
Afar dhamaadkii Tottenham waxay guuldaro 1-0 ah kala kulantay Ajax kulankii lugtii hore laakiin kulankii lugtii labaad waxay samaysay soo laabasho cajiib ah iyada oo 3-2 ku garaacday Ajax taas oo wadarta labada Kulan ka dhigtay barbaro 3-3 ah waxayna Tottenham finalka tartanka Champions League ku soo gadhay sharciga goolasha martida ah.
Guud ahaan xiil ciyaareedkan waxay Tottenham soo ciyaartay 12 kulan oo Champions league ah, waxay soo guulaysatay 6 kulan waxayna soo guuldaraysatay 4 kulan halka 2 kulan ay barbaro soo gashay iyada oo 20 gool soo dhalisay halka 17 gool iyadana laga dhaliyay.
Tottenham waxaa gool dhalinta kooxdeeda ee xili ciyaareedkan ee tartanka UCL hogaaminaya Harry Kane iyo Lucas Moura oo min 5 gool soo dhaliyay.